I-La Jolla Studio, i-Ocean Views kunye neLoft
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguPortia
UPortia ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Indlu yethu yestudiyo epholileyo nepholileyo, ehlaziywe ngokupheleleyo kulo nyaka uphelileyo (2019), iziyadi nje ukusuka kuLwandlekazi lwePasifiki kunye neebhloko ezintandathu ezimfutshane ukuya kumanxweme anesanti. I-cottage ilingana kakuhle ukuya kuthi ga kwezine, inebhedi yendlovukazi kunye neloft enebhedi ezimbini ezingatshatanga.
Sisentliziyweni ye-Bird Rock - umgama nje ukusuka kwikofu ekumgangatho wehlabathi, iindawo zokutyela ezimangalisayo, ii-pubs, iwayini kunye ne-charcuterie, umculo ophilayo, iipaki ezintle, ulwandle kunye nezinye izinto ezininzi.
Ukumisa ibhasi nako kulula ukuhamba umgama ukusuka kwindlwana.
Indawo; kufutshane nebhasi, ulwandle, iindawo zokutyela, iinkonzo, konke kumgama wokuhamba.
Amanyathelo ukuya kwi-Birdrock Coffee Roasters kunye ne-Wafarer Boread, eyaziwa kumazwe ngamazwe, kunye neepubs ezininzi zasekhaya kunye neendawo zokutyela.
4.76 · Izimvo eziyi-204
Olu luluntu lokuhamba-hamba. 'Sineendlela ezijikelezayo' ezicothayo kwitrafikhi kwaye zivumela ukuwela ngokukhuselekileyo kwezitrato, ukuze ube namava kuyo yonke into efumaneka kwi-Bird Rock ngokuhamba nje.
I-Bird Rock ineendawo ezininzi zokujonga ulwandle, kubandakanya ipaki yeCalumet entle - amanyathelo nje kude. Ukuba ukhetha iilwandle ezinesanti, uLwandle lwePasifiki lukumgama wokuhamba ukuya emazantsi, kwaye iWindansea Beach eyaziwayo yehlabathi ikumgama wokuhamba ukuya emantla.
Umbuki zindwendwe ngu- Portia
Kangangoko kunokwenzeka kumacala omabini; iindwendwe ziyathanda ukuhamba ukuya elwandle, ukukhwela ibhasi/uber okanye ukuqhuba ukuya kwabaninzi
amashishini anomdla eSan Diego.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- La Jolla